Wararka Maanta: Sabti, Mar 30, 2013-Ra’iisul Wasaaraha Somalia oo Booqday Gobolka Shabeellada Dhexe, Isagoo Kulammo la Qaatay Qaybaha Bulshada (SAWIRRO)
Safarka Ra’iisul Wasaaraha ayaa wuxuu qayb ka ahaa safarradii uu ugu kuur-galayey xaaladaha ka jira gobolada dalka oo dhawaanahaan uu ku tagayay booqashooyinka, si u ogaado nolasha dadka iyo amniga.
Mudane Saacid iyo waftigiisa ayaa kulan xog waraysi ah la yeeshay qaar ka mid ah waxgaradka oo aad uga warramay dhibaatooyinka ka jira gobolka, waxayna ka codsadeen dowladda inay wax ka qabato sidii gobolka meelaha dhiman looga saari lahaa Al-shabaab, in dowladdu xoogga saarto sidii loo dhisi lahaa jidka isku xira Muqdisho iyo Jowhar oo uu ka muuqdo bur-bur iyo in maamul ay dadku soo doorteen loo sameeyo gobolka marka Al-shabaab laga saaro degmooyinka harsan.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe, Cabdi Jiinow Calasow ayaa ka warbixiyay xaaladda gobolka ee dhanka nabad-galayada iyo baahiyaha kala duwan ee ay qabaan dadku.
“Mudane ra’iisul wasaare waxaa gobolka la xoreeyey 09, Dec, 2012; mana jiro illaa hadda wax ciidan boolis ah oo ka howlgala, waxaana hadda amniga suga ciidamada xooga, waana lama huraan ah in la helo ciidan nabad-sugid iyo boolis isugu jira, dowladdu way hilmaantay gobolka mana jiraan wax mucaawino ah oo soo gaaray tan iyo markii Al-shabaab laga saaray,” ayuu yiri Cabdi Jiinoow, isagoona dhanka kale hoosta ka xariiqay in waqtigan lagu jiro xilli roobaadkii guga oo uu wabigu sameeyo fatahaad, haddii aysan ka geysan dowladdu gacan sidii looga hortagi lahaa fatahaadda waxay keeni kartaa dhibaato isugu jirta beeraha oo xumaada iyo isku socod la’aan weyn.
Intaa kaddib, ra’iisul wasaaraha ayaa khudbad dheer u jeediyay shacab aad u tiro badan oo ka qayb-qaadanayay soo dhaweynta wafdiga, isagoo aad uga mahadceliyay sida sharafta leh oo dadweynuhu ay u soo dhaweeyeen.
“Waxaan aad ugu farax-sanahay sida wanaagga badan ee aad noo soo dhaweyseen iyo ciyaaraha kala duwan oo aad soo bandhigteen sida shiribka, beerreyda, kabeebeyda iyo dhaantada, Waxaana halkaan iiga muuqda sida reer Jowhar diyaarka ugu yihiin dowladnimada, waxaana naga go’an inaad heshaan cadaalad iyo sinnaan taasoo ah siyaasadda dowladda lagu dhisay. Qaybaha kala duwan ee bulshada ee maanta ka hadlay goobtan waxay noo muujiyeen dareenkooda iyo dowlada jacaylkooda, taas ayaan sabab u ah in aan booqanay gobollo badan oo ka tirsan dalka si aan u qiimayno rabitaanka dadka,” ayuu yiri ra’iisul wasaare Saacid.
Ra’iisul wasaaraha ayaa dhanka kale u sheegay shacabka ku nool Jowhar in dowladdu wax weyn kala qaban-doonto soo jeedintooda oo ay ku sheegeen suugaanta.
“Waxaan diyaar u nahay wax kasta oo ay dowladdu idiin qaban-karto inaan dadajinno, wixii aad ka tabateen maamulka hadda jira oo caddaalad-darro ah, dowladdu si aan leex-leexad lahayn ayay wax uga qabanaysaa, maalintii la xoreeyay gobolka illaa maanta mar kasta dowladdu waxay u soo diraysay wafdi la socda xaaladda gobolka,” ayuu ra’iisul wasaaruhu ku yiri khudbadii uu jeediyay, isagoo intaas raaciyay in gobolka Shabeeladda Dhexe ay dowladdu dadaal u gali doonto sidii wax looga qaban lahaa dhanka horumarka.
Ugu dambeyn, ra’iisul Wasaare Saacid iyo wafdigiisa ayaa casho sharaf loogu sameeyey warshaddii dharka ee Balcad oo noqotay warshadda kaliya ee ka bad-baadday burburkii soo maray kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka, wuxuuna ra’iisul wasaaruhu ku aamanay reer Balcad inay yihiin dad waddaniyiin ah dowladduna ay siin doonto abaal-gud.